हायात हाेटल सञ्चालक समिति कसरी पुग्यो सराफ-श्रेष्ठको कब्जामा? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
हायात हाेटल सञ्चालक समिति कसरी पुग्यो सराफ-श्रेष्ठको कब्जामा?
मणि दाहाल असोज २३
हायात होटल सञ्चालन गर्ने कम्पनीको ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा १० जना राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ निकट सदस्य रहेका छन्। अचम्म के छ भने बोर्डमा सराफ र श्रेष्ठ परिवार भित्रैका ७ सदस्य छन्।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार २५ वर्षअघि स्थापना भएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको सञ्चालक समिति निजी साझेदारको कब्जामा पुगेको छ।
कम्पनी स्थापना हुँदा ४० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको कम्पनी सरकार निजी साझेदारको चलखेलका कारण सञ्चालक समितिमा एक जनामा सीमित हुन पुगेको हो।
हायात होटल सञ्चालन गर्ने सो कम्पनीको ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा १० जना राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ निकट सदस्य रहेका छन्। अचम्म के छ भने बोर्डमा सराफ र श्रेष्ठ परिवार भित्रैका ७ सदस्य छन्। साधारण सेयर लगानी गर्ने मध्येबाट चुनिएका एक जना र स्वतन्त्र भनेर छनोट गरिएका सदस्य पनि उनीहरु निकटकै छन्।
निजी साझेदारले सेयर संरचनामा चलखेल गरेर हत्याउन खोजिरहेको सो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व भने एक जनामा खुम्चिन पुगेको हो। त्यसको विरोध गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारा गाउँ विकास समितिले तीन वर्षदेखि प्रतिनिधि पठाएको छैन।
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा राधेश्याम सराफ, अरुणकुमार सराफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, कमलादेवी श्रेष्ठ, उमेश सराफ, राजेशलाल श्रेष्ठ, बरुण सराफ, इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी, श्रीवत्स शम्मेशर राणा, दिजा श्रेष्ठ छन्।
तारा गाउँ विकास समितिको प्रतिवेदनमा ‘हाल १ जना प्रतिनिधि मनोनयन नभएको’ उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिका सदस्य अरुण र उमेश राधेश्यामका छोरा हुन् भने बरुण नाति। उनी अरुण सराफका छोरा हुन्। सञ्चालक समितिमा श्रेष्ठ परिवारका सुरेशलाल श्रेष्ठ, राजेशलाल श्रेष्ठ र दिजा श्रेष्ठ रहेका छन्। सुरेशलाल र राजेशलाल रामलाल श्रेष्ठका छोरा हुन्। २५ वर्षअघि कम्पनी स्थापना हुँदा रामलाल श्रेष्ठ साझेदार थिए। त्यसैगरी रामलालकी नातिनी दिजा दिनेशलाल श्रेष्ठकी छोरी हुन्। रामलालका छोरा दिनेशलाल पहिले पनि सञ्चालक समितिमै थिए।
त्यसैगरी इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्वमा रहेको आइटिसिटी समूहसँग सम्बद्ध व्यक्ति हुन्। पर्यटन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गठन गरेको छानविन समितिले पनि सेयर संरचनामा चलखेल गरी २० अर्ब भन्दा बढी सम्पत्ति रहेको होटल सञ्चालक समिति एकलौटी बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। छानविन टोलीको नेतृत्व गरेका तारागाउँ विकास समितिमा अध्यक्ष नारदकुमार लुईंटेल सेयर संरचनामा चलखेल गरेर सराफ र श्रेष्ठ परिवारले सञ्चालक समितिमा कब्जा जमाएको बताउँछन्।
‘कम्पनी घाटा गयो भनेर ऋणपत्र जारी गर्ने तर ऋणपत्रको साँवा ब्याजको भूक्तानी नगर्ने, लामो समयपछि त्यसैलाई सेयरमा परिवर्तन गरी सेयर संरचनामा चलखेल गर्ने गरिएको छानविनले देखाएको छ,’ लुईंटेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यी ऋणपत्रहरु सराफ र श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले किनेको देखिन्छ।’
तारागाउँ विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नारदकुमार लुईंटेल सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने श्रेष्ठसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमै आउन नचाहेको बताउँछन्। ‘हामीले उनीसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्यौं तर सम्पर्कमै आउन चाहेनन्,’ उनले भने।
भदौ ३ गते कम्पनीले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाले वित्तिय कम्पनीमार्फत् सराफ तथा श्रेष्ठ परिवारले संस्थापक सेयर बाहेक पनि लगानी गरेको पुष्टि गरेको छ। सो विवरणअनुसार कम्पनीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सेयर ५४ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ। तर कुन कुन वित्तिय कम्पनी हुन् भन्ने नखुलाइएको प्रतिवेदनमा कम्पनीको पूँजी १ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख पुगेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगतको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको थियो। कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत थियो। अहिले यो होटल फैलिएको एक सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। तर सेयर संरचनामा भएको चलखेलको कारण सरकारी स्वामित्व ९.०१ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। सुरूमा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सरकारको लगानी घटेर ९.०१ प्रतिशतमा झरेको हो।
यसको ठिक विपरित निजी लगानीकर्ता (प्रत्यक्ष र उनीहरुको लगानीमा रहेको कम्पनीसमेत) को स्वामित्व ६१.३६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा राधेश्याम सराफको १२.२५ प्रतिशत, आइसिटिसी प्रालिको ७.८९ प्रतिशत, आइसिटिसी होल्डिङ (उमेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठ) को १०.०९ प्रतिशत, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड हङकङ (सराफ परिवार) को २१.६० प्रतिशत, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड (बिभिआइ र सराफ परिवार) को ९.५३ र तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत सेयर छ। बाँकी सर्वसाधारण र अन्यको ३२.५ प्रतिशत रहेको छ।
करिब २० अर्बभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति हडप्न प्रयास गरिरहेका निजी साझेदारले पछिल्लो समय राजनीतिक ‘कनेक्सन’ मिलाउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सल्लाहकार एवं पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेका छन्।
प्रकाशित २३ असोज २०७५, मंगलबार | 2018-10-09 20:17:35